सहज र सुन्दर: खिलौने भण्डारण लागि 13 डिजाइन विचार
को वासस्थान भर छरिएका खेलौनाहरु, गुडिया र मिसिन थुप्रो जहाँ त्यहाँ छोराछोरी छन् हरेक घरमा देखेको। आफ्नो सिट मा पुतली, को LEGO र अन्य खिलौने सफा गर्न तपाईं र तपाईंको छोराछोरीलाई प्रोत्साहन, हामी सबैभन्दा स्टाइलिश विचार कम्पनी को केही "भण्डारण" साझेदारी हुनेछ।
एक ग्यारेज निर्माण
मिसिन खेल्न रुचि जो एक बच्चा छ जो कोहीले, यो कसरी कष्टप्रद तिनीहरूले अन्ततः आफूलाई चोट को जोखिम उल्लेख छैन, सबै तल्ला माथि छरिएका फेला गर्दा हुन सक्छ थाह छ। तर हात गरेका ग्यारेज, आफ्नो बच्चा एक प्रोत्साहन गर्न "पार्क" कार, खेल भन्दा हुँदा दिन्छ।
मास्टर खेत जनावर
बरु छोराछोरी, सबै घर भन्दा नरम भव्य खिलौने फेंक एक खेत वा भालू र सिंह लागि चिडियाघर जस्तै केहि सिर्जना गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन अनुमति को। नजिक वा खुला, आवश्यक भएमा हुन सक्छ आफ्ना छोराछोरीलाई सजिलै र सुरक्षित ढोका गर्नुहोस्।
एउटा सानो दराज बनाउन
ढिलो होस् वा चाँडो, सबै बालिका, गुडिया खेल्न, तिनीहरूलाई पोशाक ड्रेस अप गर्न थालेका छन्। तदनुसार, विभिन्न ठाउँमा छरिएका लुगाहरू धेरै, त्यहाँ छ। सफासँग लुगा भण्डारण गर्न प्यारा झुन्डिएका कोठरी सिर्जना गर्नुहोस्।
व्यावहारिक फर्नीचर ठाँउ
यसलाई फर्नीचर को आफ्नो छोरी टन को कोठा भर्न मात्र होइन, तर पनि यो कार्यात्मक बनाउन आवश्यक छ। यो niches, समतल, सबै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कुराहरू भण्डारण गर्न दराज थियो कि मनमोहक छ।
तपाईं विशेष स्विंग आफ्नो मनपर्ने नरम खिलौने को सबै राख्नु भने आफ्नो बच्चा, उहाँले एक चिडियाघर मा सो छ जस्तै महसुस हुनेछ। तपाईं जनावर प्रत्येक अन्य झूल थिए भनेर, विभिन्न हाइट्स मा समतल बनाउन सक्छ।
हामी दराज भण्डारण गर्न
निस्सन्देह, मदत कैबिनेट गर्न ढोका गर्न दृष्टि बाहिर खिलौने राख्न, तर तपाईं स्पेस संगठित बाटो पनि ठूलो महत्व, यस्तो कैबिनेट भद्रगोल हुन सक्छ किनभने छ। यसलाई उज्ज्वल रंग वा छडी लेबल संवाददाता inscriptions संग मा बच्चाहरु संग हस्ताक्षर, बक्स, बास्केट र अन्य वस्तुहरू खिलौने भण्डारण गर्न मा राखिएको गर्न सकिन्छ।
पाङ्ग्रेमा ट्रली किन्न
तपाईं को लागि चित्रकला, sculpting वा अर्को बच्चाको सोख सम्पूर्ण कोठा चयन भने पनि, सम्भवत, उहाँले अझै पनि यो मात्र होइन यो कोठा मा, जताततै गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ। कम्तिमा एक ठाउँमा भण्डारण भएका सामाग्री सबै अनुमति दिने, पाङ्ग्रेमा ट्रली किन Boon हुनेछ छ।
हामी एक पढाइ कुना बनाउन
केही त ठाउँ रूपान्तरणहरूलाई र एउटा उज्यालो प्रकाश रूपमा छोराछोरीको ध्यान आकर्षित गर्दैन। तपाईं, प्रकाश संग र धेरै स्तरों मा एक किताब दराज सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ स्थित हो, र खिलौने र पुस्तकहरू।
हामी एक पर्खाल आयोजक बनाउन
आफ्नो घर ठाउँ सीमित छ भने, यो शानदार आयोजक तपाईं बचत हुनेछ। तल तपाईं टोकरी वा लुगा लागि समतल गर्न सक्नुहुन्छ, र माथिल्लो मा - सुन्दर पुस्तकहरू कि बच्चाहरु ओछ्यानमा जानुअघि पढ्न प्रेम समायोजित।
"आदेश मा" भान्सा
तपाईं एक महंगा भान्सा सेट चाहनुहुन्छ भने, तर यो पर्याप्त पैसा छैन, तपाईंले आफ्नो विचार जीवन, यो हात को एक सानो प्रतिलिपि बनाउन ल्याउन सक्छ। तपाईं कुनै पनि सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यति धेरै कुराहरू मंत्रिमंडलों र समतल राखिएको सकिँदैन किनभने बच्चाहरु, यो प्रेम हुनेछ।
रंग बक्से को मास्टर
तिनीहरूले भुइँमा राखिएको गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले तखता वा फर्नीचर अन्तर्गत थप सुरिलो नजर हुनेछ। तिनीहरूले, रंग सक्नुहुन्छ चाहेको रूपमा सजाउनु।
पाङ्ग्रा मा एक किताब दराज बनाउन
यो सबैभन्दा मनपर्ने खेलौनाहरू र पुस्तकहरू आफ्नो बच्चा हुने एक ट्रक, जस्तै केहि निर्माण गर्न सम्भव छ। उहाँले अर्को एक कोठा बाट सबै आवश्यक पहाड बोक्न छ छैन, र यो घर को विभिन्न भागहरु मा छोड छैन।
हामी यो खेल स्टेशन बनाउन
तपाईं जो समतल, दराज को धेरै निर्माण गर्न सकिन्छ एक सोफा, आवश्यक हुनेछ। किनभने सबै तपाईं आवश्यक बच्चा मा हात मा हुनेछ यो, सानो अपार्टमेन्ट को मालिक को लागि विशेष गरी उपयोगी छ। यहाँ उहाँले आकर्षित गर्न सक्छ, र कन्सोलमा प्ले, पढ्न र बस आराम।
प्रकार र घरेलू पर्दे को विशेषताहरु
जलजीवालय पृष्ठभूमि - स्पर्श जलजीवालय डिजाइन खत्म
छाते Flioraj: व्यावहारिक स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण!
LPO 2h36: विवरण र विशेषताहरु
निकट भविष्यमा विकास मेट्रो नक्शा
सबैभन्दा व्यावसायिक वा भरोसा गर्न: अनुहार contouring
र बेफाइदा: गर्भावस्था को समयमा Nospanum
Dialectal शब्द - यो के हो? के शब्द क्षेत्रीय भाषा भनिन्छ?
टैंकको संसारको लडाई प्रभावकारीता के हो र यो के हो?
मशरूम संग प्यानकेकहरू। व्यञ्जनहरु।
सम्मोहन द्वारा मादक पदार्थ उपचार। प्रक्रिया अवलोकन
Irrigator B.Well: पुस्तिका र समीक्षा